AI-inotyairwa mCommerce maitiro ekutarisa - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
AI-inotyairwa mCommerce maitiro ekutarisa
Munyika yanhasi, kufambira mberi kwehunyanzvi kunofanirwa kuve iyo poindi huru. Kwemakumi maviri emakore apfuura, iyo nguva yedhijitari yakaona akawanda kukwira nekudzika muindasitiri. Kunyangwe, kutengesa kana chikamu chezvekutengeserana ikozvino chikamu chakakura cheiyi digitalization. Pamusoro peizvozvo, pamwe nekuwedzerwa kwezvishandiso zvakati wandei se machine learning, chakagadzirwa njere, Big Data and so on, many opportunities are opened up for business.Additionally, the key industries such as eCommerce, agriculture and education are taking advantage of such technology.
mCommerce uye AI
chakagadzirwa njere yave kuumba iyo mCommerce indasitiri that will increase the demand and public image of a company. There is not even an ounce doubt that AI is full of capabilities that can help in mCommerce Mapuratifomu and improving online business. Now, it is available in the market so that industries can leverage it irrespective of visitor’s choice.
Sezvinoenderana nezvakanyorwa, zvinofungidzirwa kuti panosvika 2025, AI ichave ichitonga indasitiri. Izvi zvese zvinoitwa nekuda kwekuti AI iri pano kuti ivandudze kubatanidzwa kwevatengi nemakambani anozounza shanduko huru munguva yehunyanzvi. Kunyangwe munguva yanhasi, kune zvinopfuura makumi matanhatu muzana muzana emakambani anoenderana nematavheti ekubatana kwavo kwebhizinesi nevateereri. Pamusoro peizvozvo, kutaurirana kwe chatbot kunonyanya kufarirwa kana ichienzaniswa nekubatana kwevanhu kunopa poindi yekuwedzera kune indasitiri inotungamirwa neAI.
Kana iwe uri mushopper kana kana mubatanidzwa webhizinesi saka iwe unoto nzwisisa kukosha kwekutaurirana commerce. Makambani anozvivimba nazvo kare uye kunyange vashandisi vari kutora mukana wakazara pazviri. Mune mutauro wakajairika, chatbots anonyanya kushandiswa nebhizinesi nevashandisi kuti vataurirane. Icho chiito chakazvimiririra sevhisi yemushandisi iyo inogona kugadzirisa mibvunzo yavo, kudyidzana navo, uye kurekodha zvavanoda-zvinyorwa
Pamusoro peizvi, basa rega rega richaitwa munguva chaiyo inozongowedzera kufarira kwevatengi. Kana makambani achida kuti chigadzirwa chavo chitengeswe 24 × 7 saka mune dzakadai kesi chatbots ndiyo yavo sarudzo dzakanakisa. Izvi zvinochengetedzawo yakawanda mari pakutarisirwa kwevatengi uye ichavandudza ruzivo rwevateereri.
Tsvaga & Navigation
Saizvozvowo, makambani ari kuuya nedzimwe nzira dzinogona kushandiswa nevashandisi kuti vatsvage zvigadzirwa zvinoenderana. Pamusoro peizvozvo, ichashandisa kugadzirisa mutauro mutauro kuve nechokwadi chekuti mhedzisiro yekutsvaga yakakwenenzverwa uye yakadzikiswa pasi kune yakakosha pane iyo haywire mhedzisiro.
AI ikozvino iri kuita pfungwa yevhidhiyo kune yavo mCommerce munda zvakare izvo zvinoita kuti kugadziridza uye kuongorora zvemukati zvive nyore kwazvo.
Semuenzaniso, Affectiva inyowani nyowani yekutanga yazvino inogona kududzira zviri nyore manzwiro evanhu nerubatsiro rwechiso chavo. Mune tekinoroji yakadaro, kamera uye sensors zvinoshandiswa kuona mhedzisiro chaiyo. Kunyangwe AI inogona kushandisa kurekodha chero eemaitiro anoenderana nevatengi kududzira nekuvandudza yavo yekushambadzira mhedzisiro.
Kana iwe uchitaurirana nehunyanzvi hwekufambira mberi, saka iwe unogona kuziva nezve 20156 kuwanikwa - Macy ari kufona. WMBon weIBM akabatana maoko naMacy kuti auye nerubatsiro rwekutenga. Chinangwa chikuru cheichi chigadzirwa ndechekubatsira vatengi nemibvunzo yavo uye nekuvandudza ruzivo rwekutenga. Macy akavapa ruzivo.
mCommerce uye eCommerce might by almost the same but there is a thin gap between them. Both the industries require optimization continuously to stay abreast of the competition.
Pamusoro pe izvozvo, mCommerce has given a competitive edge to the business by making it much smarter and faster. The hunhu hunesimba hweAI has made it gain popularity and with mCommerce at its toes, we can only assume what great changes they will bring.
Kana iwe uri kutsvaga mCommerce app or need AI/ML solutions, do get in touch.